रेलको कुरा उठ्‍याे नेपाल र चीनकाे वार्तामा
सनराइज खबर स‌ंवाददाता २३ भदौ सोमबार, २०७६	२०:१५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आए । चीन भन्नासाथ आजकाल नेपालमा रेल बुझिन्छ । चिनियाँ विदेश मन्त्री आउँदा चीन–नेपाल रेलका बारेमा चाहिँ के निर्णय भयो ? के कुराकानी भयो ? नेपालमा उत्सुकता हुने गरेको छ ।
विदेश मन्त्री वाङ यी आइतबार नेपाल आएका हुन् र उनको भ्रमणका क्रममा रेल लगायतका ठूला पूर्वाधार सम्बन्धी सन्धि सम्झौता हुने कुनै कार्यक्रम थिएन । उनको भ्रमण मित्रवत् सम्बन्ध विस्तारमा सीमित हुने बताइएको थियो । त्यसैले वाङको भ्रमणका क्रममा रेल निर्माण जस्ता ठूला र दिर्घकालीन महत्वका परियोजनामा ठोस निर्णय नहुने नै थियो ।
जानकारहरु भन्छन्– चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आए भने चाहिँ रेल निर्माण सम्बन्धमा ठोस निर्णय हुनसक्छ । वाङको भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीका लागि पनि हो भन्ने ठानिएको छ । तैपनि चिनियाँ विदेश मन्त्री आएको बेला रेलका बारे कुरा भएन होला त ? यसको जवाफ दिएका छन् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बीबीसी नेपाली सेवालाई । ज्ञवालीका अनुसार वार्ता क्रममा रेलका विषयमा कुरा भयो ।
रेलमार्ग निर्माण नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहेकोबारे आफू जानकार भएको विदेश मन्त्री वाङले बताएको ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । वाङले यो कठिन पूर्वाधार परियोजना भए पनि यसलाई पूरा गरेरै छाड्छौं भनेका छन् ।
रेलका बारे भएको कुराकानी र औपचारिक रुपमा चुहिएको सूचना यति मात्रै हो । त्यसो भए रेलमार्ग बन्छ त ? यसको जवाफ चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आएको बेला मात्र पाइने जानकारहरु बताउँछन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङ आउँदो महिना भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसबेला उनी नेपाल आउने आँकलन गरिएको छ । उनको भ्रमण नौ घन्टाको मात्र हुने भनी कतिपय सञ्चार माध्यमले समाचार दिएका छन् । तर, यसमा तथ्य के छ भने चीनले आफ्ना उच्च नेताको भ्रमणको तिथि पहिले नै कहिले पनि घोषणा गर्दैन । अन्तिम समयमा मात्र घोषणा गर्छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछन् भन्ने पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको थियो तर औपचारिक रुपमा नेपाल र चीन दुवैले पुष्टि गरेका थिएनन् । विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणको तीन दिन अघि मात्र दुवै देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणबारे औपचारिक रुपमा जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए । जानकारहरुका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण कस्तो हुन्छ, कहिले हुन्छ र कति अवधीको हुन्छ भन्ने अहिले नै किटान गर्न गाह्रो हुन्छ ।
के चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन्छ ? रेल सम्बन्धी सम्झौता हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनौपचारिक रुपमा भने– ‘भ्रमण हुन्छ नै । अनि रेल सम्झौता पनि हुन्छ । रेल सम्झौताको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म अनिश्चित छ ।’